Home Somali News Somaliland: Nuxurka Kulan Dhex Maray Madaxweyne Silaanyo Iyo Guddida Doorashooyinka Qaranka
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Silaanyo ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay guddiga doorashooyinka qaranka, iyagoo ka wada hadlay hawlaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta.
Golaha guurtida ayaa muddo kordhintii ay sameeyeen waxay ku go’aamiyeen inay doorashooyinku qabsoomaan horaanta sannadka 2017 halka ay xisbiyada iyo xukuumadu isla qaateen in doroashooyinka la qabto bisha December ee sannadka 2016.
Waxaanay guddiga doorashadu Madaxweyne Siilaanyo ka dalbadeen in la isla qaato labadaas wakhti midkood si loo gudo gawlo hawlaha doorashada iyo jadwalka shaqo ee guddiga doorashooyinka. Warku wuxuu sheegay in Madaxweyne Siilaanyo guddiga doorashada u sheegay inuu ku hawlanyahay xal u helida khilaafka ka taagan wakhtiga doorashada la qabanayo. Madaxweyne-xigeenka Md. Saylici oo isna halkaas ka jeediyay hadalo kooban ayaa tilmaamay sida ay qaran muhiim u tahay in la isku raaco wakhti la isku raacsanyahay oo aan khilaaf ka taagnayn.
Wasiirka Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo madasha fadhiyay ayaa isna la sheegay inuu tilmaamay inay xukuumad ahaan jecelyihiin inuu hirgalo heshiiskii ay wada gaadheen xisbiyada iyo xukuumadu, isagoo dhinaca kalena tilmaamay go’aanka golaha guurtida. Si kastaba ha ahaate kulanka ayaa lagu tilmaamay mid marka laga tago warbixino la iska dhagaystay aanay ka soo bixin natiijo miisaan leh oo la xidhiidha xal ka gaadhista khilaafka doorashada.